Oromoo Dhaabbaa Tokko Siirna Tokko GADAA jalati ijramu qaba.
Kun yaada Qileensa irrati adeema jiru qofa utuu hin tane, mulata qoorannoo gudan irrati gegefama fi Hayyuulee Oromoo fi lammin baran irrati waliif galame Waga 20 ol waan irrati dhama'aa jiru dha. Nami wayee Oromoo Bareese Qoortan Russia Bulatovich dhimma kana waga 120 dura hubate ifati lafa ka'ee jira. Qoorannoo wal fakkata waga 2O darban gutuu gegesa ture keessati Oromoo dhimmaa Gaanfa Afrika irrati Murtesa akka ta'uu yoo barbana ta'eef Angoo fi Feedhi dhunfa uttu hin tanee Oromoo Bilisomsine Abbaa Gaanfa Afrika goochuf kayyoo qabna yoo ta'ee tokkoma Dhaabbilee Oromoo hunda siirna GADAA Jalati ijaare mirkaneesu qabna.
Oromoo dhaaba tokko qabachu qaba, kun waan jalane fi ykn waan jibinef miti, Oromoon siirna gadati deebiyu qaba, siirni gada wal dorgomu hin qabu seera Gadaatiin abooti keessa oganna isaa sadarka hundati flata, erga Oromummaa barbana ta'ee seera Oromoo fi safuu Oromooti deebiyu qabna, erga Gadaa gane garbomne. Amayuu dhaabbaa Oromoo lama miti tokkof walka ilee yoo qoodamne wal baleesina, Oromoon yeeroo wal lolu walti ciimada diina caalaa, Wal dorgomiin WFDO fi OBK giduuti goodhame QINJITif caaraa bane, kun waan ji'a 2 giduutu ta'ee seena guda ta'ee Abbaa Mana fi Haadha mana utuu hin hafiin wal hisiseera, OPDO, OFC, ABO, WFDO, KFO, OPC,ABOT, ODF,kkf hundi Gadaa tokko jalati Alaba tokko jalati ijaramne Oromoo Abbaa Gaanfa Afrika goochu qabna. Qeerroon kanaaf wareegama guda kafaleera, qabsoon Oromoo butamee dhimmaa birraf olu hin qabu.
Oromoo Haqa kana fudhachu qaba, nami ykn qamii Oromoof qabsa'uu hundi. Isaa of isaa qabsa'uu dhisati wara Oromoof qabsa'uu yaada kana hubachisa, diini unin garagar nu qoodee of isaati amoo wal ijaruuf caraqa jira. Oromoo diina tufata yeeroo hunda kanaaf moo'atame yoo tokko ta'ne qabsoofne garuu hin moo'atamu.
Dhaabbilee Oromoo kana haalaa duree tokko malee fudhatan hoji irra olchu qabu, kun ta'uu banaan Qabsoo ummani Oromoo waga 150 itti qabsa'ee wagaa 50 ol qabsoo hidhanoo gegesun wareegama qaqalii ini kafala ture Ogannoota Oromoo qaqaroon irrati wareegaman, Qabsoo qeerroo Oromoo waga 3 keessati lubu 5000 ol itti wareegana butamee dhimma birraf oluuf haalaa mijatatu jira. Oromoo utuu tokko hin ta'iin horma waliin tokko ta'uu bala isaatu hamadha. Dhaabbiilee Oromoo tokko ta'aan saba fi sabilami cunqurfamafi ilee sagale ta'uu qabu. Kana qoofa utuu hin tane Gaanfi Afrika gara tokkummati waan adeema jiruf Oromoo tokko ta'ee humana tokko fi humana cimma ta'ee tokkuma kana fi siyaassa Gaanfa Afrika irrati ga'ee isaa xabachu qaba dha. Nagaaf Tasagabin Gaanfa Afrika irrati kan dhufu Oromoo humana cimma ta'ee Gaanfa Afrika irrati gegesuman yoo hirmate qoofa jeechun qoorannoo wagoota 20 ol goodhama jiru gara qabataman hoji irra oluf deema jira kanaaf amoo ciimine hojeechun dhugumsu qabna. Kun ta'uu banan amasi ciidha keenya irrati hormi wal fudhee akkama bara 1991 sun akkma baroota isaa dura uni bo'aa jirana.
Injiifannoon uumata Oromoof.